သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: Leaders' view on Leadership
ဒီအက်ဆေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးပတ်က ကျွန်မအလုပ်က စီအိုအို မစ္စတာ ဘရင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဒါရိုက်တာ မစ္စဒိုင်ယာနာကင်းနဲ့၊ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ ယူနီဗာစီတီက Clinical ပရိုဖက်ဆာ ဦးမင်းကြည်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၏ အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်တွေကို အက်ဆေးအဖြစ် ကျွန်မပြန်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Education for Myanmar Youths မှာလဲ တင်ထားပါတယ်ရှင်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မရေးထားတဲ့မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောင်မှ မြန်မာဘာသာနှင့် ပြန်လည်ရေးသားမည်ဟု စဉ်းစားထားပါသည်ရှင်။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:07 AM
ကဏ္ဍ : Essay in English, အတွေးအမြင်
In my opinion,aleader is one who help others become leaders themselves :)
This is in line with your view that ordinary people who makeapositive difference, however small, isaleader because that difference is the start ofanew path on spiritual evolution foranew generation.
ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့..အခါအခွင့်လဲလိုမယ်နော်..ကောင်းတယ်..မ..ရေ.(နံမယ်ရှည်လို့နော်း) ဗျူးတင်ထားတာတောင်ခုမှလာပြောတာ..သတင်းတွေလိုက်နေလို့း)အဆင်ပြေလားမသိဘူး..နဲနဲလေးတကြောင်းထပ်ထဲ့ထားလို့
ဖတ်သွားတယ် .. တွေးစရာတွေနဲ့ ပြန်သွားတယ် ။ မပန်လို ခေါင်းရှောင်လိုက်ဦးမယ် အဟဲ